Hay’adda NISA oo sheegtey in Muqdisho iyo Qardho lagu faafiyey mad’habta Shiicada | shumis.net
Home » islam » News » Hay’adda NISA oo sheegtey in Muqdisho iyo Qardho lagu faafiyey mad’habta Shiicada
Hay’adda NISA oo sheegtey in Muqdisho iyo Qardho lagu faafiyey mad’habta Shiicada
Hay’adda nabadsugidda ee NISA ayaa shaacisey laba qof oo u dhashey dalka IRAN kuwaas oo mad’habta Shiicada ku faafinayey Soomaaliya, nimankan ayaa dalka Soomaaliya ku joogey in ay yihiin Samafalayaal.
Hay’adda NISA oo soo bandhigtey Basaboorada ay wateen ayaa lagu sheegay magacyadooda
Mashruuca ay dalka ka fulinayeen ayey ku sheegeen in ay fulineyso hay’adda gargaarka ee Al-imaam Al-Khumeyni ee safaaradda Iran raacsan
Waxaana ka mid ahaa hawlaha ay u xilsaarnaayeen:¨
Xuska Mowliidka Nebiga (NNKH)
Iyo taageerada dhalinta is guursanaysa
Sida lagu sheegay warka ka soo baxay hay’adda NISA hay’addan ayaa bartilmaameedkeedu yahay bisha Mowliid iyo guur wadareed.
Hay’adda NISA ayaa sheegtey in muddo dheer oo ay daba joogeen ogaadeen dad badan oo Soomaaliyeed in ay gaarsiiyeen Mad’habta Shiicda kuwaas oo si rasmi ah u qaatey, kana tegey Mad’habtoodi Ahlu-Sunnah Waljamaacah.
Waxaa kale oo ka mid ah barnaamijtooda dad dhallinyaro ah in ay u qaadaan Iran, waxayna isugu jiraan dhallinyaro iyo NGO, kuwaas oo lagu soo shubayo afkaarta Shiicada looguna golleeyahay marka ay dalka kusoo noqdaan in ay faafiyaan shiicada. Sidoo kale waxay bixiyaan deeq waxbarasho oo ah heer jaamacad iyo heer Master ah kuwaas oo ay ka qaadaan jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay.
Hay’adda NISA ayaa shegtey in dad ka tirsan Dowladda federaalka ah ay xiriir hoose la leeyihiin hay’adda IRAN ka dhisan ee Soomaaliya ka faafineysey mad’habta Shiicada.
Hay’adda IRAN ayaa magaalooyinka kale oo ay Shiiceynta ka sameeyeen waxaa kamid ah magaalada Qardho ee ka tirsan Dowladd Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo magaalooyin kamid ah Gobolada Dhexe.
Maamulka degmada Qardho ayaan marna ka hadlin jiritaanka hay’addan iyo qaababka ay hay’addani ugu shaqeysey deegaanadooda.
Safiirka IRAN ee Soomaaliya ayaa NISa sheegtey in uu si qarsoodi ah ku booqdo degmooyinka Muqdisho. Kadib macaluushii Soomaaliya ka dhacdey sanadkii 2011 ayaa IRAN u soo dirtey Soomaaliya safiirkii u horeysey sanadkii 2012 xiligaas oo uu Madaxweyne ahaa Shiikh Shariif Axmed
Dalka Soomaaliya ayaa ah 100% dad SUNNI ah ma jirin madaahib kale oo ka shaqeysey dalka Soomaaliya.
Hoos ka eeg Dukumintiga NISA ay saxaafadda u qaybisey ee ay wateen labada qof ee ay qabteen:
Title: Hay’adda NISA oo sheegtey in Muqdisho iyo Qardho lagu faafiyey mad’habta Shiicada